Gumaata Kaampaasii 12: 'Erga harmeenkoo duutee ittiin of gargaaruuf jecha fakkii kaasuu jalqabe' - BBC News Afaan Oromoo
Gumaata Kaampaasii 12: 'Erga harmeenkoo duutee ittiin of gargaaruuf jecha fakkii kaasuu jalqabe'
Image copyright Darajjee Sirneessaa
Goodayyaa suuraa Suuraa Darajjee Sirneessaa
Rakkoon umurii ganamaan nama mudatu mul'ata karaatti namaa hambisuun alattis yeroo tokko tokko caalaa nama cimsuun mul'ata ofiitti kan dhiyeessan fakkaata.
Barataa Darajjee Sirneessaa ijoollummaa isaati haati isaa irraa duunaan inniifi obbolaan isaa of danda'anii barachuuf dirqaman.
Darajjeen kutaa sadaffaa yeroo baratu irraa kaasee fakkii kaasuu jalqabe. Hanga har'aa barataa yunivarsiitii ta'ee ittiin jireenya isaa of tumsuu irra darbee ogummaa kanaan beekamtii argataa jira. Kallattii barumsa isaas ogummaa isaa ganamaa kanaan wal simsiifatee egeree isaa waan argaa jiru fakkaata.
Qophii keenya Gumaata Kaampaasii torban kanaatiin seenaa Darajjee isiniif dhiyeessineerra.
Barataan medaaliyaan eebbifame icciitii milkaa'inaa maali jedha?
Kaayyoo qabaannaan ilaalchi boodatti hafaa boodatti nama hin ambisu
Maqaan koo Darajjee Sirneessaan jedhama. Kanan dhaladhe Godina Kibba-Lixa Shawaa magaalaa Waliisootti.
Yeroo ammaa Yunvarsiitii Saayinsiifi Tekinooloojii Adaamaatti barataa Arkitekcherii waggaa shanaffaati.
Jiruufi muuxannoo waggaa shanii maal fakkaata?
Ogummaa fakkii kaasuu ijoollummaa irraa kaaseen horadhe. Sadarkaa tokkoffaafi sadarkaa lammaffaa yeroon barataa ture fakkiiwwan adda addaan kaasaan ture.
Nama biraa kan na gargaaru waanani hin qabneef ogummaa kanaan galii argachuun of gargaaraan barataa ture. Ergan yunivaarsiitii seenees ogummaa kana barnoota koo cinaatti hojjechaan ittiin of gargaaruun itti fufe.
Fakkii kaasuudhaaf maaltu isa kakaase?
Fedhii ogummaa fakkii kaasuu kanan horadhe yeroon sadarkaa tokkoffaa barataa turedha.
Kutaa lammaaffaafi sadaffaa yeroon jiru barnoota Artii hedduun jaalladha ture. Yeroo sanattis barsiisonni hojii gaarii artii ani qabu ilaalanii meeshaa guutuu naaf dhiyeessaa turan.
Du'a haadhaafi wallaansoo of danda'anii jiraachuu
Yeroon kutaa afraffaa baradhu haati keenya nu jalaa duute. Namni nu gargaarus dhibe. Kanaaf, barumsas waanan sirriitti danda'aa tureef anaafi obboleessa koo barsiisotatu nu gargaaree akka barannu nu gochaa ture.
Gargaarsa barsiisonni nuuf taasisaa turan cinaattis fakkii kaasuudhaanis of danda'ee akkan baradhu na gargaareera.
Gargaarsa barsiisotaafi galii fakkii kaasuu irraa argadhuu cinaatti gaazexaafi lotorii gurguruu, akkasumas kophee qulqulleessuutiinillee of gargaaraan ture.
Fakkiin koo jalqabaani ittiin dandeettii koo arge barsiisaan waan naannoo keenyatti argamu irraa fakkii kaasne akka geessinu hoji-manee nuuf kenninaan fakkii mana citaa ani kaase ture.
Hojiin hanga ammaatti hojjedhe kessaa kan ani ittiin boonu ammoo fakkii namaa osoo qalamaafi waraqaa hin fayyadamiin mismaaraafi kirriitiin fayyadamee kanan kaasedha.
Kun ammoo (string art) jedhama. Biyya alaatti kan beekamu yoo ta'ellee biyya keenyaatti hedduu baramaa miti. Ani garuu hojii artii yeroo baayyee waanuman argerraan hojjechuu yaala.
Turtiin yunivarsiitii maal fakkaata?
Yeroon waggaa jalqabaa yunvarsiitii seenu, jireenyi kan duraa irraa adda natti ta'e. Duraan namootaa beeknu waliin jiraanna ture. Yeroo jalqabaa xiqqoo haarawaa natti ta'ee itti baruuf yeroo natti fudhate. Kun ammoo hangan itti baruttile yeroo muraasa hojii ogummaa koo akkan dhaabu na taasiseera.
Kaayyoo qaba waanan tureef garuu karoorfachuudhaan hanga ji'a ja'aatti yunvarsiitichatti of madaqseen jireenya koo mo'achuun qaba jedheen murteesse.
Ji'a ja'aan booda fakkii kaasuun jalqabe. Hangan waggaa sadaffaa gahutti barattoonniifi namoonni hedduun ogummaa kootiin na hin beekan ture.
Erga sanaa booda garuu fakkii koo hedduu jaallataa dhufan, anaanis na baran. Yeroo sana barattoonni doormii koo dhufanii daawwachuu jalqaban.
Jireenyi doormii namoota waliin jiraachuun garuu rakkoo natti uume. Warri ana waliin doormii koo jiraatanis yeroo hedduu fakkiiwwan koo tutuqanii qalama isaa irraa na jaalaa kaasu ture.
Sodaa na jalaa balleessuu jedhuun anis yeroon daree barnootaa deemu, mana nyaataafi kaaffeellee deemu na rakkisa ture. Kun baayyee na rakkisaa ture.
Booda irra garuu hojjetoota yunvarsiitichaa waliin walbareen isaanitti rakkoo koo kana himadhee isaanis qophaa kootti doormii anaaf kennan.
Amma doormii qophaatti haala gaariidhaan bakkan itti hojjedhee agarsiisu argadheera.
Rakkoo hojii fakkii kaasuun walqabatee qabu
Hanga ammaatti bakkuman jiraadhu doormii koo keessatti fakkiiwwan kaasee namoonni dhufanii ilaaluu qofa malee bal'inaan baasee agarsiisuu hin dandeenye.
Qarshii muraasa namoonni daawwatan naaf kennan malee hojii fakkii koo kana baasee beeksisee gurgurachuu hin dandeenye. Kuna ammoo dandeettii keessa koo jiru guutummaatti akkan baasee hin fayyadamne na dhorkeera. Ogummaa koo kana guddisuudhaafis gargaarsa hin qabu.
Image copyright Darajjee Sirneessa
Duraan yeroon yunvarsiitii seenu Mekkaanikal Injiinaringii hanga waggaa sadaffaatti baradheen ture. Garuu inni fedhii koo waan hin turreef duubatti deebiyeen kan fedha koo ta'e Arkitekcharii barachuu jalqabe. Amma waggaa shanaffaarran jira.
Walumaa galatti waggoota saddet yunvarsiitii keessa tureera jechuudha.
Barnootaafi artii akkamiin waliin deemsisa...?
Ani guutummaa jireenya koo artii fakkii kaasuu waliinan guddadhe. Kanaafuu, ergan yunvarsiitii seenee booda akka hiriyyaa kootiitti, akka obbolaan kootiitti, akka maatii kootiitti artii waliinan jiraadha. Barnoota deemeen yoon dhufu deemeen fakkiiwwan koon ilaalaa, fakiiwwwan adda addaan kaasa. Kanaan ala bakka biraa hin deemu. Kanan itti bashannanu, yaada koos kanan ittiin ibsachuu danda'u fakkiidhaan waan ta'eef bakka biraa hin deemu.
Kanaafuu, ergan yunvarsiitii seenee booda akka hiriyyaa kootiitti, akka obbolaan kootiitti, akka maatii kootiitti artii waliinan jiraadha.
Darajee Sirneessaa, Ogeessa fakkiifi barataa Arkitekcherii
Waanta ani hojjedhu barumsa kootiin ala miti. Yunvarsiitii keessatti yeroo baayyee barattoonni kaan garuu saatii barumsaan alaa bakka adda addaa deemuun bashannanuun dabarsaa kan jiran.
Ani ammoo yeroo koo kan itti fayyadamu fakkii kaasuudhaaf waan ta'eef barumsa koo irratti dhiibbaa hin fidu. Gammachuudhaan waanan hojedhuufis baayyee natti tole.
Ogummaa koo gabbisuudhaaf yeroon mana barumsaa sadarkaa tokkoffaafi lammaaffaa keessa jiru barsiisotaafi namoota gara garaa qunnamuun irraan barachan ture.
Ergan yunvarsiitii seenee ammoo karaa miidiyaalee hawwaasummaa, interneetaan karaa you tube ta'uu danda'a kitaabota adda addaa argacuu waanan danda'uuf nan dubbisa.
Finfinneetti ykn magaalawwan gurguddoo keessatti yeroo agarsiifni (exhibition) yeroo qophaa'an daawwachuudhaan namoota ana irra jiraniifi muuxannoofi barumsa addaa addaa qaban nan gaafadha, isaan irraas nan baradha.
Malawwan akkasii kanaanan ogummaa koo guddifachaa deema jechuudha.
Ofii koonis agarsiisa fakkii (photo exhibition) adda aadaa qopheesseera, irrattis hirmaadheera. Yunivarsiitiin Saayinsiifi Tekinooloojii Adaamaa qophiiwan adda addaa irratti akkan hojiiwwan artii koo agarsiisuuf na garagaaraa tureera.
Kanama malees, magaalaawwan Waliisoofi Finfinneetti agarsiisa fakkiiwwan koo qopheesseera, irrattis hirmaadheera.
Hanga ammaatti fakkiiwwan kaase lakkoofsaan beekuu hin danda'u. Yeroo ammaattillee fakkiiwwan dhibba ta'an ana bira jiru.
Anaan yeroo baayyee fakkii akkan kaasu kan na kakaasu yaadadha. Yaada haqa lafa irra jiru, kan jiruufi jireenya uummataa keessatti mul'atuufi namni salphaatti ilaalee hubatun kaasa.
''Kaayyoo ofii dagannaan, soogidda bishaan waraabuu dhaqxe ta'uudha''
Gumaata Kaampaasii 7: Seenaa mana barumsaa Medikaalaa Yunvarsiitii Finfinneetti qabxii ol-aanaa galmaa'e
26 Muddee 2018
Gumaata Kaampaasii 11: Kaayyoo qabaannaan ilaalchi boodatti hafaan nama hin gufachisu